भारतमा पञ्चामृत झैं बाँडिदै अक्सिजन, अवस्था झन् खराब – Satyapati
भारतमा पञ्चामृत झैं बाँडिदै अक्सिजन, अवस्था झन् खराब
एजेन्सी । भारत सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन पञ्चामृत झैं बाँडेको त्यहाँका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । संक्रमितको अवस्था खराब हुँदै गइरहँदा अस्पतालहरूले अक्सिजन पठाइदिन तारन्तार आग्रह गरिरहेका छन् । तर, झट्टै पठाइहाल्ने आश्वासन दिने गरेको सरकारले पूजाको प्रसाद जति पठाउने गरेको र सो परिमाण देखाउनका लागि मात्रै हुने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका हुन् ।
अक्सिजन अभावकै कारण दिल्लीस्थित गंगाराम अस्पतालमा अप्रिल २३ तारिखका दिन २५ संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । ६० जना संक्रमित गम्भीर अवस्थामा पुगेका थिए । अन्य रातहरूमा झैं सो रात पनि अस्पतालका प्रमुख ७२ वर्षीय डा. डीएस राणाले सरकारी अधिकारीहरूसँग अक्सिजन पठाउन अनुनय विनय गर्दै थिए । तर, ‘अब पठाइहाल्छौँ’ भन्ने एकोहोरो जवाफमात्रै पाएको राणाले बताए ।
गंगाराम अस्पतालको आइसीयूमा त्यतिबेला गम्भीर अवस्थाका ३० भन्दा धेरै बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा थिए । राणाले बीबीसी हिन्दीसँग भनेका छन्, ‘८/१० वर्ष पुरानो भेन्टिलेटरलाई अक्सिजनको जति दबाब चाहिन्छ, त्यो थिएन । हामीले आफ्नै तरिकाले अक्सिजन दिइरहेका थियौं, अक्सिजन अभावकै कारण १३ घण्टासम्म यस्तो गर्नुपर्यो ।’ दिल्लीका गंगाराम, बत्रा, सरोज, मूलचन्द र पेन्टामेड लगायत अधिकांश अस्पतालमा अहिले पनि यही स्थिति छ ।
भारतका कयौं स्थानमा अक्सिजन अभावका कारण अन्य समस्यासँग जुधिरहेका र कोरोना संक्रमित गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको ज्यान गइरहेको छ । अक्सिजन सिलिण्डरको कालोबजारी भइरहेको छ । विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले रुँदै र चिच्याउँदै अक्सिजन मागिरहेका छन् । यस्तो दृश्यले नै भारतमा यतिखेर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कति धराशायी भएको छ भन्ने थाहा लाग्छ ।
आधिकारिक भनिएको आंकडा हेर्दा भारतमा कोरोना संक्रमणपछि ज्यान गुमाएकाको संख्या २ लाख नजिक पुग्दैछ । गंगाराम अस्पतालका प्रमुख डा. राणाका अनुसार पुराना भेन्टिलेटर भएका अस्पतालमा कम्तिमा ३ हजार क्यूबिक मिटर अक्सिजन रिजर्भ हुनुपर्छ, तर, अहिले अभाव हुँदा बिरामी जोगाउन सकस परिरहेको छ । अहिले अस्पताललाई ६४ वटा रिफिल सिलिण्डर दिइएको छ ।
तर, कोरोना संक्रमित बिरामीलाई कोभिड इमर्जेन्सीबाट आइसीयू वार्डमा लैजाँदा यी सिलिण्डरको प्रयोग हुन्छ । अस्पताललाई तत्काल पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध नगराए एकसाथ हजारौं कोरोना संक्रमित बिरामीको ज्यान जानसक्ने स्थिति रहेको भारतीय चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।